१२ बर्से बला,त्कृत बालिका आइन मिडियामा, विचरा! रूँदै यस्तोसम्म सुनाइन, भाउजुले बन्धक बनाएर ज्यान मार्ने धम्की दिँदै लगातार ४ दिनसम्म करणी (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
मोरंग । मोरङको पथरी सनिस्चरे मा एउटा घिनलाग्दो घटना घटेको छ । आफ्नै भाउजुले १२ बर्षिय नन्द लाइ फकाएर अन्य परपुरुष संग जबर्जस्ति करणी गराएको भन्दै आक्रोशित भएका छन् । पिडित बालिकाको अनुसार भाउजुले मादक पदार्थ खुवाएर आफुलाई नसामा केटाहरुको घर लिएर गएको बताएकी छिन। आफुलाई जबर्जस्ति करणी गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि आफ्नी भाउजु र ति युवालाइ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । १२ बर्षकी युवतीलाइ भाउजुले चटपटे खान जुम भन्दै फकाएर लगेपछि अन्य ३ जना युवालाई बोलाएर माधक पदार्थ खुवाएर बेहोस बनाई लागेको बताएकी छिन। भाउजुले पहिले पनि ५ दिन यस्तै गरेको तर आफुलाई मार्ने धम्कि दिएकोले मैले कसैलाई नसुनाएको उनले बताएकी हुन् ।
घटना कसरि घट्यो ? आफ्नै भाउजुले कोठामा थुनेर बन्धक बनाएर यस्तोसम्म गरेको सुनाइन कि सुनेर सबैका आखा रसाए । उनले पहिलोपटक मिडियामा आएर सुरूदेखिको सम्पूर्ण नालीबेली रूँदै सुनाएकी छिन । ज्यान मार्ने धम्की दिदै ४ दिनसम्म पटक पटक जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै पापीनी भाउजुको समेत कालो कर्तुतको पर्दाफास गरेकि छिन । यस बिसयमा सम्बन्धित पिडित युवती संग गरिएको कुराकानी तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।